Habsami u socodka hawsha diwaangalinta cod-bixiyaashay oo dareen togan ku beertay Qurba joogta somaliland | Maalmahanews
Habsami u socodka hawsha diwaangalinta cod-bixiyaashay oo dareen togan ku beertay Qurba joogta somaliland
Dallada Somaliland Societies in Europe (SSE) oo ah dallad ay ku bahoobeen ururka Somaliland ee ka Jira qaaradan Yurub ayaa soo saaray baaq kooban oo ay ku muujinayaan dareenkooda togan ee ka dhashay fulinta hasha diwaan galinta codbixiyayaasha.
Waxaanay soo saareen baaqan hoos ku qoran
Taariikh : 21/01/2016
Tixraac : SSE/Fr – 001/16
Dallada SSE waxay diiwaangelinta codbixiyayaasha u aragtaa waajib ina saarnaa oo hadda fulintiisii lagu dhaqaaqay
Dallada SSE oo ay ka bahoobeen ururada Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan kooban ku muujinayaan dareenka togan ee ka dhashay fulinta hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waynu ognahay in doorashooyinkii hore ay inoo suurtoobi weyday inaynu ku galno diiwaan gelin sugan. Waa Ilaahay mahadii in hadda Somaliland ay ka bilaabantay diiwaangelintii si aynu doorashooyinka 2017(ka) ugu galno doorasho ku salaysan diiwaangelin rasmiya.
Ugu horreyn guddiga iyo dhammaan xubnaha Dalladu waxay mahad balaadhan u soo gudbinayaan dhammaan cid kasta oo gacan ka gaysatay fulinta iyo bilaabida hawshan diiwaangelinta oo ay ka mid yihiin Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Saddexda Xisbi iyo dabcan Xukuumadda Somaliland iyo laamaheeda kale ee ay hawshan u adeegsanayso.
Gobbolada kale ee Somaliland:
Gobbolada kale ee Somaliland waxa aanu iyagana kula dardaarmaynaa inay u sii diyaar garoobaan fulinta barnaamijkan diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waa hawl loo baahanyahay in la iska kaashado shicib iyo xukuumadba. Waa barnaamij aynu rajaynayno inuu sii adkeeyo nidaamka Dimuqraadiyadeed ee aynu qaadanay. Waa barnaamij karaamo iyo milgo u yeelaya haddii doorashooyinka soo socda aynu ku galno nidaamkan diiwaangelinta codbixiyayaasha. Dan iyo faa’iido ayaa inoogu jirta ee yaanay Gobboladu dhayalsan habsami fulinta hawshan diiwaangelinta. Dallada SSE waxay hubtaa in shicibka reer Somaliland ay ku baraarugsanyhiin qiimaha ay inoogu fadhido in waddankeena ay ka dhacdo doorasho xor iy xalaal ah oo ka duwan doorashooyinkii hore oo lahaa dhaliilahooda. Waynu ognahay qabashada doorashooyinku in aanay sahlanayn, waxayna wataan hawshooda iyo dhibaatooyinkooda. Si haddaba hawlaha iyo khilaafyada ka dhasha doorashooyinka loo yareeyo ayaa waxa lagama maarmaan inoo ah inaynu ku galno nidaamka diiwangelinta codbixiyayaasha
Muwaadin kasta oo gaadhay da’dii lagu codeynayay waxa aanu xasuusinaynaa in is-diiwaangelintu ay tahay waajib qof kasta gaarkiisa u saaran. Muwaadin waa xuquuq kuu gaar